Afarta Tilmaam ee loogu talagalay Nuxurka Websaydhka La Akhrin Karo | Martech Zone
Akhriska waa kartida uu qofku u aqrin karo tuduca qoraalka oo uu ku fahmi karo kuna xasuusan karo waxa uu hada aqriyay. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo ku saabsan hagaajinta akhriska, soo bandhigida, iyo muujinta qoraalkaaga bogga.
1. Wax Uqor Webka
Akhriska shabakadda ma sahlana. Kormeerayaasha kumbuyuutarku waxay leeyihiin qaraar hoose oo shaashad ah, iftiinkooda la saadaaliyayna wuxuu si dhakhso leh indhahayaga uga daalayaa. Waxaa intaa dheer, degello badan iyo codsiyo ayaa waxaa dhisay dad aan lahayn tababar rasmi ah oo ku saabsan farshaxanka far-qorista ama naqshadeynta garaafka.
Waa kuwan tilmaamayaal ay tahay inaad tixgeliso inta lagu gudajiro qorista:
Celceliska isticmaalaha ayaa akhrin doona ugu badnaan 28% ereyada ku jira bogga internetka, marka ereyada aad isticmaasho ka dhigo kuwo la tiriyo. Tilmaamaha aan u soo jeedineyno macaamiisheenna Tuitive ayaa ah inay nuqulkaaga kalabar ka jaraan, ka dibna mar labaad u kala gooyaan. Waan ognahay inay taasi ka dhigeyso oohintaada-Tolstoy-gaaga, laakiin akhristayaashaada ayaa qadarin doona.
Adeegso luqad cad, toos ah, iyo wadahadal.
Ka fogow "suuq-geynta", qoraalka buun buuninta leh ee buuxinaya xayeysiisyada xun ("Alaabta Cusub ee Cusub!"). Taabadalkeed, bixi macluumaad waxtar leh, oo gaar ah.
Ka dhig baaragaraafyada gaagaaban, kuna koobnaw hal fikrad halkii cutub.
Adeegso liisaska rasaasta
Adeegso qaabka qoritaanka-Ahraamta qoraalka, adigoo macluumaadkaaga ugu muhiimsan xaga sare ku haya.
2. Ku abaabulo Mawduucaaga madax-hoosaadyo
Cinwaan-hoosaadyada hoosaadyadu aad ayey muhiim ugu yihiin oggolaanshaha isticmaaleha inuu ku faafiyo bog ka kooban muuqaal ahaan muuqaal ahaan. Waxay u qaybiyaan bogga qaybo la maareyn karo waxayna caddeeyaan waxa qayb kasta ku saabsan tahay. Tani waxay muhiim u tahay isticmaale adeegsanaya bogga isku dayaya inuu helo waxa ugu muhiimsan.
Cinwaan-hoosaadyada hoosaadyadu sidoo kale waxay abuuraan qulqulka muuqaalka ah oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay indhahooda hoos ugu soo wareejiyaan waxyaabaha ku jira.
Isku day inaad ku xaddiddo jirka ugu muhiimsan boggaaga (marka laga reebo marin haynta, hoose, iwm.) Illaa saddex cabbir: cinwaanka bogga, cinwaan-hoosaad, iyo nuqul jirka ah. Ka dhig farqiga u dhexeeya qaababkani mid cad oo waxtar leh. Isbarbardhiga aad u yar ee cabirka iyo culeyska ayaa ka dhigaya cunsurradu inay isku dhacaan halkii ay ka wada shaqeyn lahaayeen.
Markaad wax qoraysid, hubi in madax-hoosaadyadu ay isku koobayaan barta qoraalka ay matalayaan oo ah ereyo faro-ku-tiris ah, hana u maleynin in isticmaaluhu si buuxda u akhriyay qaybta kore ama ka hooseysa. Ka fogow luqad aad u qurux badan ama xariif ah; caddayntu waa muhiim. Madax-hoosaadyo micno leh oo faa'iido leh ayaa akhristaha ku mashquulinaya kuna martiqaadaya inuu sii wado akhriska.
3. Kula Xariir Qoraalka Qaabaysan
Cilmiga: Farsamada qoraalka waxaa loo isticmaali karaa in la xoojiyo, oo weedhahaaga sii ereyo badan oo wadahadal ah iyada oo la micno ah ku dhawaaqid cod. Tusaale ahaan, weedha “Waan kuu sheegay waxaan arkay a daanyeer”Wuxuu leeyahay macne ka duwan“ I ayaa sheegay adiga waxaan ku arkay daanyeer ”.
Dhamaan Furaha: Dadku waxay wax ku akhriyaan iyagoo samaynaya qaababka ereyada halkii ay ka xisaabin lahaayeen ereyada xaraf-xaraf. Sababtaas awgeed qoraalka ku jira DHAMMAAN CAPS ayaa ka dhib badan akhrintiisa maxaa yeelay waxay carqaladaynaysaa qaababka ereyada ee aan ku baran jirnay inaan aragno. Iska ilaali inaad u isticmaasho marinnada dhaadheer ee qoraalka ama weedho buuxa.
geesi: Geesinimadu waxay ka dhigi kartaa qaybo ka mid ah qoraalkaaga mid muuqda, laakiin isku day inaadan si xad dhaaf ah u isticmaalin. Haddii aad hayso buro weyn oo qoraal ah oo u baahan in la xoojiyo, iskuday inaad isticmaasho midab asalka ah halkii.
4. Meel xun ayaa noqon karta Oh-So-togan
Xaddiga ku habboon ee u dhexeeya khadadka qoraalka, u dhexeeya xarfaha, iyo inta u dhexeysa nuqullada ayaa si weyn u hagaajin kara xawaaraha akhriska iyo fahamka. Meeshan cad (ama "taban") ayaa ah waxa dadka u saamaxaya inay kala soocaan hal xaraf oo kan xiga, iskuna xidhaan buugaag midba midka kale, lana socdo meesha ay ku yaalliin bogga.
Intaad fiirineyso bogga, indho adkee oo indhahaaga u jeedi ilaa qoraalka uu noqdo mid aan la qiyaasi karin. Miyuu boggu si nadiif ah ugu qaybiyaa qaybo? Ma sheegi kartaa waxa madax u yahay qayb kasta? Haddii kale, waxaad u baahan kartaa inaad dib u shaqeyso qaabeyntaada.
Intee Yar Ayaa Isticmaalayaashu Wax Akhriyaan? by Jakob Nielsen
Sida Loo Qoro Qeybaha Hoose ee Fiican waxaa qoray Brian Clark
10 Mabaadi'da Loogu Tala Galay Noocyada Shabakadda La Aqrin Karo waxaa qoray Matt Cronin
Tags: Content Suuqakhrintala aqrin karo
Bixiyeyaasha Adeegga E-maylku waxay ka boodeen Shark
Jul 5, 2011 markay tahay 10:17 PM
Halkan waxyaabo fiican! Marar badan ayaa kuwa si yar loo yidhi si fiican ayaa aad ugafiican inbadan, inbadan, in kabadan si xun loo sheego. Mid ka mid ah buugaagta aan ugu jeclahay waa “Ha iga dhigin mid aan ka fikiro.” qaar ka mid ah sababaha isku mid ah ayaa halkan ku tilmaamay.